I-Ecolodge yeenkuni kunye nodaka entabeni
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguNadia
Ndiyakumema ukuba ube yinxalenye yendalo, ukuphinda udibanise nesandi seentaka kunye nomoya! Le ndlu ipholileyo ibekwe kwindawo ezolileyo kunye nemithi apho unokuhamba khona ukuya ePozo del Indio. Iimitha ezimbalwa ukusuka kwiNdlela yama-28 edibanisa iTanti neLos Gigantes! Iikhilomitha nje ezi-3.5 ukusuka eTanti, iikhilomitha ezingama-25 ukusuka eLos Gigantes kunye neekhilomitha ezingama-20 ukusuka eCarlos Paz! I-Grill kunye nesitofu saseRashiya ngaphakathi kwendlu, ukunandipha i-barbecue ukusuka kwinduduzo yekhaya okanye ekushiseni komlilo xa kubanda!
Kwipatio ungonwabela iintsuku ezinelanga zaseCordoba ngelixa upholile kwidama elikhulu leseyile, okanye unokuhlala emthunzini wemithi ukuze uphumle kwaye uphumle! Qokelela i-oregano, i-lavender, irosemary, i-peppermint, imisedare, i-lemon balm kunye nezinye izityalo ezininzi! Kuxhomekeke kwixesha lonyaka onokuthi ukwazi ukuqokelela amaqunube amnyama okanye iziqhamo kwimithi yeziqhamo emininzi ekhula kule paki!
Le ndlu ikwingingqi yaseTanti Lomas, indawo ezolileyo kude nengxolo yesixeko. Ndiyayithanda le ngingqi kuba kuyo sidibana nezityalo nezilwanyana zale ndawo, kuba sinokucinga ngeenkwenkwezi kuba ungcoliseko lokukhanya luphantsi. Apha abantwana badlala ngokuzolileyo ezitratweni njengoko iimoto zihamba ngezitrato ezimdaka ngesantya esiphantsi!
Kuluvuyo kum ukunamkela kwindawo ebiyikhaya lam kude kube ngoku! Ndiyavuya ukukwamkela, ukukwamkela kunye nokukubonelela ngolwazi onqwenela ukulifumana kwindawo kunye neendawo ezikungqongileyo! Ndikhetha imiyalezo kaWhatsapp, imiyalezo, iminxeba kwaye okokugqibela ii-imeyile. Ungaqhagamshelana nam nangaliphi na ixesha losuku ngokuhlonipha iishedyuli zokulala ngaphandle kweemeko zikaxakeka. Ndihlala nje kumgama oziimitha ezingama-300 ukusuka kwindlu ngoko kulula ukuba ndisondele xa kuyimfuneko!
Kuluvuyo kum ukunamkela kwindawo ebiyikhaya lam kude kube ngoku! Ndiyavuya ukukwamkela, ukukwamkela kunye nokukubonelela ngolwazi onqwenela ukulifumana kwindawo kunye neendawo ezik…